Midabtakoor - Wikipedia
Addoonsiga Brazil, waxaa qoray Jean-Baptiste Debret (1768-1848)
Midab Takoor (Ingiriis: racism) waa yasid lagu yasaayo qof kale midabkiisa ama muuqaalkiisa. Midab Takoorka waxaa soo raaca Addoonsi Takoor iyo Quudhsi
Faahfaahin[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Addoonsigu waa yasid, xaqirid, liidid, khasbid iyo jujuubid dadka loola dhaqmo si axmaqnimo, waxashnimo iyo bahalnimo ah oo dadnimada ka baxsan, iyadoo dadka loo isticmaalayo ama loo munaafacaadsado sida xoolaha oo kale. Adoonsigu waa ku shaqaysiga muruqa qofka iyadoo bahdil iyo maskax dulayn loo gaysanayo. Sidoo kale waxa uu leeyahay quudhsi, midab-sooc iyo sinji-takoor. Addoonsiga; wuxuu qofku ka mid noqonayaa hantida nafleyda ah ee qofka wax addoonsanayaa leeyahay. Wuu iibsan karaa, sida dibida oo kale ayuu beerta ku fashaa, sida dameeraha oo kale ayuu biyaha ku soo dhaansadaa. Haddii qofku amar qaadan waayona, waxa la markiyaa ciqaab daran oo arxan la’. Wuu garaacaa, oomiyaa, gaajaysiiyaa, geed intuu ku xidho ayuu qudhaanjo ama shinni ku cariyaa, dabadeedna qaniinyo ayey diirka iyo cadka kaga siibtaa, milic intuu ku miigeeyo ayaa raran, oon iyo diihaal naftu uga baxdaa ama uu la suuxaa. Addoonsigu waa denbiga ugu daran ee bani’aadamka laga galo. Carabta islaamka hortii iyo caddaanka (siiba repor galbeedka inta hadda laysku yidhaahdo) ayaa aad ugu caansa naa addoonsiga iyo kala gadashadooda.
Takoor[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Taaaaaakoorku waa fogeyn, karantiimayn, dullayn, yasid iyo xaqirid dad ama qof lagu xad gudbo dadnimadiisai iyo karaamadiisa, iyadoo lagu takoorayo caafimaadkiisa ama isirkiisa (qoladiisa). Takoorku waa dulayn iyo karaamo-dil qofka cirdigiisii iyo sharaftiisii hoos loo dhigo, lagana duudsiyo xuquuqdii uu bulshada ku dhex lahaa, laga fogeynayo bulshada inteeda kale xag dhaqan, dhaqaale, feker, siyaasadeed iyo xag kartiyeedba. Takoorku waa laba mid: caafimaad-takoor iyo isir-takoor. Caafimaad-takoorku wuxuu dhacaa marka qof uu ku dhaco cudur dilaa ah oo la kala qaado, dabadeedna qofkaa la karantiimeeyo, lagana fogaado oo xidhiidh loo jaro; aan wax la la cunin, aan meel lala seexan, makhaayad lala fadhiisan, weel wax lagula cunin, dharka aan lala isticmaalin iwm. Isir-takoorkuse waa marka bulsho isirkeeda la takooro, laga faquuqo; aan laga guursan, loona diido inay bulshada inteeda kale ka guursadaan, loona geysto nasab cay, yasid, liidid, maagid, hanjabaad, maskax-dil iyo jidh-dil intaba. Isir-takoorka (haybsooc) waxa aad looga adeegsan jirey dhulalka carabeed, ilaa haddana waxa si darran looga isticmaalaa dhulalka soomaalida iyo dalalka tolnimada ku dhisan.
Dadka ay soomaalidu takoorto waxa ka mid ah: Midgo, shekhaal, Tumaallo, Gabooye, Yixirro, Yibro, Boon, Xuryeel iyo Low-jir iwm. Dadkan waxa lagu fogeeyaa haybtooda (qolada ay ka soo jeeddaan), waa la haybsoocaa, waxaana lagula kacaa dhaqan qalafsan oo naxariis daran, waxa laga gawdhiyaa dhaqanka guurka, talada dalka, qabaqadda sare ee bulshada sida; maalqabeennada, tijaarta, aqoonyahannada, indheer-garadka iyo maamulka sare ee Dawladda iwm. Waxa horyaalla gidaar weyn oo nusqaan, xaqiraad, bahdil, quudhsi iyo karantiimayn ku dhisan oo aan u oggolaanayn inay bulshada caadiga ah ka mid noqdaan. Iska daa dadkaa in soomaalinimo loo qirsanaadee, xitaa bani’aadanimo looma aqoonsana. Wax liita oo naf aan lahayn oo uraya ayaa loo arkayaa.
Quudhsi[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Quudhsigu waa cay, yasid, liidid, maagid, hanjabaad iyo bahdil. Had iyo jeerle waxa la quudhsadaa ama la soocaa dadka dacdaran/ildaran. Quudhsigu waa saddex nooc: midab-sooc, muuq-sooc, caafimaad-sooc. Waa nooc gooni ah oo laga biyo diidayo abbuurta Rabbaaniga ah, isla markaan bulshada inteeda badan muuqaalka, midabka iyo caafimaadka loogu jaangoynayo, ciddii ka midab duwan, ama ka muuqaal geddisan, amaba caafimaadkoodu aanu taam ahayn lagu yasayo, laguna quudhsanayo. Midab-sooc: soomaalidu dadka ay midab-soocdo waxa ka mid ah ‘Xamar Cad-cadka’ ama Shaashida oo ay aaminsan yihiin in shaki ku jiro soomaalinimadooda, iyagoo ku dura in aanay soomaali dhab ah ahayn. Waxa lagu gawdhiyaa xukunka iyo dabaqadda sare ee bulshada.
Muuq-sooc: soomaalidu waxay muuq-soocdaa dadka timo-adagta ah “Jareerta” . oo ay ku quudhsato ama ku yasto abuurtooda (timahooda adag iyo daloolka sankooda weyn) sidaasi awgeed ayey soomaalidu xuquuqdii dadkaasi ummadda dhexdeeda ku lahaayeen ugu duudsideen, uguna tumteen, isla markaana ay bulshada gooni uga faquuqeen. Waxa xusid mudan in reeraha difaaca adag leh, (kuwa isir ahaan iyo dhaqan ahaanba soomaalinimada isu qirsan) inay ku jiraan kuwo timo adag oo san dalool weyn leh balse xijaabka qaraabanimo iyo kan qabyaaladeed ayaa kaga gudban inay isir la noqdaan dadka la muuq-sooco.
Caafimaad-sooc: waa xaqiraad, iin-sheeg, naaqusid, laxaad-quudhsi iwm. Caafimaad-soocu waxa lagula kacaa dadka laxaadka daran, kuwa iinta Rabbaamiga ah leh; waxa loogu yeedhaa magacyo ka dhan ah muuqaalkooda, sida dhegaweyne, gacma-dheere, food-buur, indhoweyne, gaabani, buurane (gaabow, kuusow, goobbe)iwm. Waa dhaqan-xumo bulshadeenna raggaadsatay, in badanna soo taxnayd. Waa turxaan la qarin kari lahaa, balse laga doorbiday in la sheeg sheego. Waa cay la joogteeyey iyo aflagaaddo la sharciyeeyey. Waxaad maqlaysaa magacyo loogu yeedhayo kuwa lugaha iinta ku leh sida: laangadhe, cuguf, jeeri, luglow, curyaan, dalboole, cagoole iyo jiis iwm. Kuwa gacmaha wax ka qaba; gacanlow, faroole, gacmadheere; kuwa indhaha wax ka qaba; indhoole, cawar, weershe iyo ildab; kuwa afka wax ka qaba; carablow, gaagaale, hag-hagaale, shigshigaaye, aflow, afqalooc iwm. Kuwo meelo kale wax ka qaba, sida dhegoole, indhoole iyo maalaayiin magac oo foolxumo, cay, iin iyo aflagaaddo huwan oo la joogteeyey dabadeedna sidaa ku qabatimay.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Midabtakoor&oldid=217294"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 23 Sebteembar 2021, marka ee eheed 01:06.